गुलाब Kuleshov: जीवनी र फोटो
आज यो सोभियत युग बेला सहित असामान्य र अनौठो घटना, को समाज सिक्न संभावना छैन कि विश्वास छ मानसिक क्षमता। मानिसहरू प्रेस Roza Kuleshova र वैज्ञानिकहरू बीच कारण छ जो हल्ला बारेमा बिर्सन्छन्। यो साधारण महिला वास्तविक चमत्कार देखाए। धेरै मानिसहरू विश्वास छ कि गुलाब Kuleshov - मानसिक। यदि त्यसैले यो साँच्चै मामला थियो? का उपलब्ध तथ्य प्रयोग हेरौं।
गुलाब Kuleshov: आफ्नो जीवनको जीवनी
यस परिषद-देश राष्ट्रिय यसलाई "अरू सबैले जस्तै।" थियो शोषण गर्ने रियर मा महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को प्रसिद्ध सैनिक, तर मजदूर थिए। गुलाब Kuleshov 1940 मा जन्म भएको थियो भएकोले न एक न त अन्य सम्बन्ध छैन। को यूराल मा एक गाउँमा बस्ने केटी, विद्यालय गए तर समाज लाभ उठाउन रूपमा लाग्यो। यस समयमा यो स्थिति लगभग सबैको थियो। उहाँले शिक्षित थियो - र कृपया काम गर्न आउँछन्। बस त यो जो कोहि खुवाउन छैन, र व्यवस्था पराश्रयिता प्रोत्साहन गर्दैन।
सात वर्ष देखि स्नातक पछि, रोजा Kuleshov Nizhny Tagil नर्स को शहर मा एक अस्पतालमा बसे। अनुसन्धानकर्ताहरूले, अझ गम्भीर लागि खोज गर्न केटी धक्का नजिक कला क्यारियर गर्न भन्ने तथ्यलाई बारेमा मौन छ, तर बीस उमेर मा त्यो पाठ्यक्रम अवैतनिक स्नातक। हामी साधारण ज्ञान तथ्यलाई मात्र राज्य गर्न सक्छन्, यो पनि एक सानो थप प्रकट गर्छ। पाठ्यक्रम पछि गुलाब अन्धा लागि नेतृत्व नाटक क्लब थियो। ती दिन, सरकार संस्कृति गर्न नागरिक को इच्छा उत्साहित भएको छ, कि जसले जनसंख्या विकास संलग्न हुनेछ मान्छे को लागि जब तिर्ने सिर्जना छ। ज्ञान मान्छे त्यो धेरै निष्कपट र निश्छल व्यक्ति थियो रोजा remarked।
बस गुलाब को उमेर छोटो, तर उज्यालो थियो भनेर याद गर्नुहोस्। त्यो उमेर 38 वर्ष मा मृत्यु भयो। दुखद असामयिक मृत्यु को कारण - मस्तिष्क मा आक्रान्त।
के घटना सुरु साथ
हामी प्रत्येकले विकल्प को क्षण छ। शायद, मान्छे कुरा महत्त्वपूर्ण, जीवन-परिवर्तन हुँदै सामना महसुस छैन। तिनीहरूले intuitively सबै स्वाभाविक र पूर्ण सामान्य हुन्छ भनी विश्वास, अज्ञात मा पहिलो चरण बनाउन। जाहिर छ, कि गुलाब Kuleshov सोच गर्नुपर्छ। यो महिला को जीवन को वर्ष सुरक्षित दुई चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ: अघि र पछि। र Rubicon जब त्यो अन्धो मान्छे को काम संग संलग्न भए समय छ। उनको शुल्क पुस्तकहरू पढ्ने तरिका देख, ब्रेल, गुलाब रुचि भए र एक प्रयोग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे। स्रोतहरूबाट भन्न जस्तै दुई हप्ता मा पूर्ण यो प्रविधी महारत छ। Kuleshov गुलाब अन्धा हात लागि पुस्तकहरू पढ्न थाले। यहाँ पनि मानिन्छ जो रोशनी क्षण आयो। त्यो mischievously पारंपरिक पुस्तकहरू पढ्दा लागि नयाँ कौशल प्रयोग गर्न प्रयास गर्न संभावना छ। यो ब्रेल प्रशिक्षित औंलाहरु पाठ पासोमा परे जब उनको आश्चर्य कल्पना गर्नुहोस्। आफ्नो खोज द्वारा रोजा एक मजाक रूपमा उपचार। त्यसपछि undereducated महिला यो लगभग एक चमत्कार गढा छ कि साधारण परे भएको छ छैन थाह थियो। पक्कै पनि क्षमता केटी छैन त्यहाँ एउटा सानो प्रकोप थियो भने, विश्व मा अज्ञात रहेका छन्।
1962 मा, रोग अस्पताल गर्न महिला नेतृत्व छ, त्यो अस्पताल दाखिल भएको थियो। त्यहाँ प्राण साथीहरू रम्न गर्न "फोकस" थाले को सादगी र दया छ। त्यो समय मुद्रित पाठ, मात्र आफ्नो औंलाहरु संग, अन्धा जस्तै पढ्न सिकेको Kuleshov गुलाब, तर पनि कोहनी। विरामीहरु छक्क परे र "चाल" त्यो उत्तेजित गर्दछ रूपमा unravel गर्न ठगी मा एक महिला फसाउन प्रयास, फेरि देखाउन गर्न आग्रह गरे। छक्क र प्रशंसा कुराकानी मुख्य चिकित्सक आए। उहाँले रोजा कार्यालय zazvat र उनको दृश्य को हस्तक्षेप बिना पढ्न हेर्न माग। को प्रयोग डाक्टर को शुद्धता सुनिश्चित गर्न एक pillowcase पहिलो पुस्तक फँस। महिला overawed थिएन। त्यो झोला मा उनको हात फँस र अपरिचित शब्द abstruse वैज्ञानिक पाठ पढ्न भन्दा ठेस, एक impromptu थाले।
महिला को असाधारण क्षमता बारे जानकारी स्थानीय अखबार आए। यो संवाददाता Kuleshov जीवनी Rose कि पाठकहरु बाहिर खडा गर्दैन भन्नुभयो, तिनीहरूको अचम्मको प्रतिभा पत्ता लगाउन सक्षम थियो। सोभियत प्रकाशनहरूमा अक्सर सामाग्री साधारण मान्छे को सानो कामहरू बारे, त्यसैले बोल्न, शैक्षिक उद्देश्यका लागि प्रकाशित छन्। तर लेख स्थानीय शिक्षकको कलेज को एक कर्मचारी को नजर मा पर्यो। मानिस अनुसन्धान मा मनोविज्ञान को क्षेत्र मा लगे छ। उहाँले घटना रुचि भयो। गुलाब Kuleshov (कागज मा देखाइएको केटी को फोटो) नै लागि अप्रत्याशित रूपमा अनुसन्धान को वस्तु भए। डाक्टर जीवन अन्धो लागि सजिलो बनाउन प्रविधिहरू सिर्जना गर्न भौतिक प्रयोग गर्न उनको शरीर को गोप्य प्रकट गर्न प्रयास गरेका छन्।
को प्रयोग अन्तर्गत जीवन
सिक्न एक असाधारण महिलाको शरीर, Sverdlovsk मा निर्णय एक गम्भीर शैक्षिक संस्था मा। गुलाब यो शहर सार्न थियो। साक्षी अनुसार, तिनीहरूले उनको mercilessly यातना। ज्ञान मानिसहरू धेरै संग बोझ उनको क्षमता को गोप्य unravel सकेन। एक महिला धेरै पटक आनुवंशिक सामाग्री छानबिन गर्न एक बायोप्सी (छाला को कट टुक्रा) लिएको छ - यो पकड गर्न सक्नुहुन्छ। गुलाब प्रयोग को एक श्रृंखला भाग थियो। त्यो एक भद्र तलब रेडियोबिना मा बस्थे। प्रतिभा लागि कुनै एक आर्थिक प्रोत्साहन गर्न लाग्नुभएको थियो। यी अध्ययन हदसम्म एक स्वैच्छिक आधारमा बाहिर थिए। गुलाब त्यो विभिन्न धर्काहरू को विशेषज्ञहरु संग सहयोग गर्न इन्कार कहिल्यै राजधानी यात्रा गर्न आफ्नो धन मा थियो। हामीले यसको जवाफ थिएन। उनको घटना तैपनि साहित्य मा वर्णन गरिएको र नाम थियो "गुलाब Kuleshova प्रभाव।"
पाल्तु जनावर र प्रयोग
Eyewitnesses के Kuleshov रोजा थियो आफ्नो memoirs मा लेखे। त्यो धेरै शान्त, रोगी र अनुकूल व्यक्ति थियो। यो अरूले प्रयोग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ, भ्रमण गर्न आउँछ। कम्पनी कसैलाई त्यो उनको औंलाहरु यस्तो लेखिएको छ कि मेरो आफ्नै आँखाले बनाउन चाहन्थे भने, कहिल्यै आपत्ति। मानिस विशिष्ट, गैर-मानक घर अनुभवको लागि अवस्था संग आउन आग्रह गरे। उदाहरणका लागि, एक अतिथि गुलाब नजिक र कस कपडा blindfolded। यो त्यहाँ सक्दैन जासुसी गर्न भने कुनै पनि अंतराल छन् जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, आयोजकहरु को अनुभव पछि देखि महिला नजिक र ठाउँ जहाँ पुस्तक टाढा उनको टाउको गरियो। तर यो अझै पनि, पढ्न एक पटक कुनै गल्ती बनाउन। को प्रयोग को शुद्धता शङ्का, कुनै एक थियो।
गुलाब किन क्षमता देखाउन इन्कार गर्नुभयो?
ती महिला संग च्याट गर्न मौका गर्ने गवाहीलाई अनुसार, ठगी को उनको भयानक आरोप छोयो। निश्छल प्राण न्याय माग। उहाँले झूट थियो भनेर प्रमाणित गर्न - त्यो मात्र एउटा तरिका सक्छ offender दण्ड। तसर्थ, उहाँले (एक सहित र वैज्ञानिकहरू) उनको प्रतिभा अन्वेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको उत्सुक अस्वीकार गरेनन्। खैर, पढाइ - छैन दर्शक प्रभावित जो मात्र अद्वितीय क्षमता, उठ्नुभयो। त्यो मुद्दा रंग, को बाक्लो झोला मा स्थित देख्न सक्थे। छ, यो आफ्नो हात द्वारा distinguishes! आज महिला को घटना बारे लिखित कुराहरू धेरै। त्यहाँ उनले चाक पढ्न थियो प्रमाण हो। यो सत्य हो? अज्ञात। तर औंलाहरु र औंलाहरूको, कोहनी सही पाठ र रंग बीच भेद।
आफु उनको गोप्य खोजी तिनीहरूलाई मदत, प्रतिभा बारेमा वैज्ञानिकहरूले बताउन खोजिरहेका थिए उठ्नुभयो। त्यो रंग फरक "स्पर्श" भन्नुभयो। रातो, उदाहरण, न्यानो हात र पानीका मुहानहरू लागि। हरियो गर्मी देखि नहीं आउँछ, र उहाँले "प्रतिरोध गरेनन्।" पदहरू यो पनि हामी को मद्दत तिनीहरूलाई पढ्न एकदम बाटो कथित छ। अक्षरहरू र पुरै शब्द विशेष स्पष्टै distinguishable sensations छाला गर्न वृद्धि दिनुहोस्। उहाँलाई अनुसार, त्यो मुद्रित को अर्थ पहिचान र ठूलो स्वरले पुनरुत्पादन। र त्यो कागज वा मुद्दा स्पर्श गर्नु आवश्यक छैन। त्यो बारम्बार experimentally प्रदर्शन गरेको छ जो लगभग दुई सेन्टिमिटर को एक दूरी, मा वर्ण को रंग र सार लाग्यो। यो हुन्छ, यो केवल भावना सर्तहरू व्याख्या गर्न सकिएन। वैज्ञानिकहरू पनि खोज गर्दै छन्, तिनीहरूले मस्तिष्क गतिविधिसँग सम्बन्धित छन् रूपमा शरीर मा परिवर्तन के हो।
गुलाब Kuleshov: जोखिम
हामी छेउमा देखि देख, यसलाई हेर्न कसरी वैज्ञानिक संसारमा भित्रबाट छैन। उहाँले ईर्ष्या, षड्यन्त्र, झूट र छल भरिएको छ। मानसिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, सबै साधारण नागरिक र हार्ड कार्यकर्ता जस्तै कमजोरीहरू द्वारा विशेषता। क्षमता गुलाब विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों मा छानबीन। वैज्ञानिकहरूले आफ्नो सिद्धान्त अगाडि राख्नु छन्, तिनीहरूले प्रमाणित गर्न खोजे। केही छाला उज्यालो संवेदनशील कक्षहरू (वा अन्य शिक्षा) मस्तिष्क गर्न संकेत प्रसारित कि छ कि लाग्यो; अरूलाई महिलाहरु को जीन मा जवाफ पाउन खोजे, त्यहाँ अन्य विचारहरू थिए। यो घटना र यसको बोक्ने को wayside द्वारा युद्धको गर्मी मा तल गए। महिला भाग्य समस्या वैज्ञानिकहरू मोहित अब इच्छुक छ। को घटना यो व्याख्या गर्न सक्षम रहेको छैन, यी मान्छे उनको ठेगाना मा आलोचना भङ्ग।
त्यो सही, कुनै तरिका गुलाब गर्न के भयो, भनिन्छ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक भ्रष्टाचार सार्वजनिक भयो। केन्द्रीय प्रेस महत वैज्ञानिकहरू द्वारा हस्ताक्षर सामाग्री, पर्दाफास थिए। सामान्य व्यावसायिक डाह कारण यी खुशी, योग्य illusionists साथ दिए। - swindler वा मानसिक गुलाब Kuleshov: छलफल वैज्ञानिक समुदायमा? आश्चर्यजनक, यो विषय एक महिलाको क्षमता भन्दा धेरै रोमाञ्चक थियो। गाउँमा को संरक्षक सेन्ट यो थियो, एक निवासी मेरो हजुरआमा ल्याए छ। सफा र इमानदार तर त्यहाँ एक प्राण थियो। प्रतिभा को कमी द्वारा उत्पन्न माटो गर्न प्रतिक्रिया नकारात्मक उठेर मिडिया पृष्ठमा बाहिर छप।
लड्न वा हटाउनुहोस्?
त्यहाँ सक्दैन, तिनीहरूले पर्याप्त छन् आफ्नै व्यक्तिको सामना गर्न जीवन मा अवस्थामा छन्। छद्म-वैज्ञानिक quarrels प्रभावित कसरी अशिक्षित महिला गर्ने? सबै आफ्नो शक्ति थियो, र त यो गरे। रुचि कुनै प्रदर्शन क्षमता, सबै भन्दा राम्रो रूपमा म भावना व्याख्या सक्छ खोजे। तर, यो पर्याप्त थियो। Pundits कार्य संग सामना छैन, आफ्नो ज्ञान पर्याप्त थियो। तर सबै छ। सम्मान विशेषज्ञहरु यस घटना को अध्ययन लागि उपयुक्त सैद्धान्तिक रूपरेखा सिर्जना गर्न सकेनौं। एक महिला charlatan घोषणा धेरै सजिलो र यसरी आफ्नो विफलता कवर अप। हामी त गरे। परित्याग वा "कालो भेडा" बन्न: गुलाब कुनै विकल्प बाँकी। एक, इमानदार सभ्य र खुला महिलाहरु को लागि न एक न त अन्य असम्भव थियो।
र उत्पादन फेला परेन!
गुलाब Alekseevna हरेस गर्नुभयो। गयो अनुसन्धानकर्ताहरूले को निमन्त्रणामा उनी प्रतिक्रिया र एक प्रयोग दिनुभयो। त्यहाँ उनको गोप्य प्रकट र आफ्नो noses विज्ञान को फोहोर Gossips हटाउन हुनेछ जो एक विशेषज्ञ छ कि आशा। तर उपहार thinkers दिनुभएन। यसलाई अहिले व्याख्या गर्न सजिलो छ। सोभियत विज्ञान वर्तमान घटनाहरू केही अस्वीकार गरेको छ। त्यो, केहि त्रुटिपूर्ण थियो दुनिया एक-पक्षीय मानिन्छ। मानसिक क्षमता त्यो बस, अस्वीकार खातामा लिएको थियो। सबै वैज्ञानिक प्रतिमान को स्कोप परे छ कि, एक ठगी र छलछाम (जो, प्रसंगवश, एउटै छ) घोषणा गरे। अन्धो बच्चाहरु - गुलाब यसलाई आवश्यक गर्नेहरूलाई भयो। त्यो साझा को deprived आफ्नो उपहार छोराछोरीलाई व्यक्त गर्न खोजे। त्यतिबेला म सबैभन्दा प्रतिभाशाली विद्यार्थी गरिएका कि साशा Nikiforov लेखे। केटा एक दूरी (उहाँले अन्धो थियो) मा वस्तुहरु भेद सक्छ, म एक पुस्तिका बिना भयो।
यो कथा परिणाम बिना हुन सक्दैन। पहिले नै भन्नुभयो, महिला मात्र तीस-आठ वर्षको बस्ने, तपाईं, धेरै सानो हेर्न! त्यो साँच्चै सत्य लागि लड्न थियो। आफैलाई लागि न्यायाधीश, यो मोनेटाइज गर्न तिनीहरूले भन्न रूपमा, मोनेटाइज गर्न फरक वातावरणमा हुन सक्छ जो क्षमता, छ। तर यो मृतक illusionists को देश मात्र पार्टी र सरकारको अनुमति भए गर्न, सोभियत संघ थियो। सरल महिला विज्ञान को प्रशाशनिक तन्त्र संग लड्न थियो। र त्यो जित्यो। त्यसैले गुलाब को विजय के? हामीले यसबारे भूल छैन। मानौं त्यो लामो पहिले मृत्यु भएको थियो, तर यो वैज्ञानिक साहित्य मा एक ट्रेस बायाँ र प्रसिद्ध मान्छे रुचि भएकाहरूलाई को हृदयमा। र: रोजा Kuleshov सन्तानहरू पाठ प्रस्तुत। यो सबै समय मा तपाईं विज्ञान को ignoramuses को कृपा गर्न आत्मसमर्पण हुँदैन भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन्। तपाईं राम्रो लाग्छ भने, त्यहाँ बाहिर निस्कन। तिनीहरूले प्रोफेसर उनको उपहार समाधान गर्न चाहनुभएन, यसलाई अन्धा गर्न उपयोगी छ। मान्छे आनन्द दिन (वा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ) - सहमत, यो मानव अस्तित्वको परम अर्थ छ। गुलाब mediocrity बन्द रोक्नु र यसलाई आवश्यक गर्नेहरूलाई बारी बल फेला परेन।
एक हात लाइन मा बच्चा कहाँ छ र के यो भविष्यमा हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ?
Tectonic पारी: को खतरनाक परिणाम